Vaovao - Ny famindran-toerana efa simba ambanivohitra dia iray amin'ireo tetik'asa fikarohana fonenana vy
Ny fananganana trano vy dia ny fanatanterahana seismika any ambanivohitra, vanim-potoana fohy fananganana, ambaratonga avo amin'ny indostrialy, fitsitsiana angovo, azo averina, sns., Mifanaraka amin'ny foto-kevitry ny fampandrosoana maitso nasionaly sy ny fananganana fitarihana politikam-piarahamonina mpamonjy loharanon-karena.
“Tetikasa fikarohana trano fonenana vy ny famindran-toerana efa simba ambanivohitra”
Ny trano vy ao anatin'ny vidiny mirindra akaiky ny fototry ny fotoana sy ny enta-mavesatra dia hahena manodidina ny iray ampahatelony. Indrindra ho an'ny toe-javatra voajanahary mahantra any avaratra andrefana, ny firafitry ny vy amin'ny fanorenan-trano dia tsy ho toy ny tranobe nentim-paharazana mora tohina amin'ny toetr'andro, raha toa ka mamorona kojakoja ilaina ny orinasa ary avy eo misafidy ny vanim-potoana fananganana mety hapetraka eo- toerana.
Manafaingana ny fampandrosoana ny firafitry ny vy fananganana dia ny hampiroborobo ny fanovana sy ny fanavaozana ny indostrian'ny fananganana mba hahatratrarana ny fanavaozana ny indostrian'ny fananganana dia lafiny iray lehibe amin'ny fandevonan-kanina ny vy be loatra, ny famolavolana vy stratejika tahiry fepetra lehibe. Ny famindrana trano efa simba ambanivohitra dia iray amin'ireo tetik'asa fikarohana amin'ny firafiny vy.
Amin'izao fotoana izao dia namolavola sy namolavola trano 90 metatra toradroa hatramin'ny 300 metatra toradroa trano vy ho an'ny avaratra andrefana sy ny faritra atsimo andrefana ary ny fananganana ambanivohitra vaovao. Izy io dia novolavolaina tamin'ny rafitra, fikojakojana, gorodona ary fampidirana. Mifanentana amin'ny tontolo iainana sy haingana ny toekarena. Ny dingana manaraka amin'ny fananganana ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny rafitra vy, ny fampandrosoana ny teknolojia fanodinana sy ny fananganana vaovao miaraka amin'izay koa, ny Gansu Construction Investment dia ho amin'ny taona 2016 ao amin'ny Distrikan'i New Gansu Investment Investment 100.000 metatra toradroa an'ny trano avo namboarina ihany tetikasa rehetra dia mampiasa firafitra vy, amin'ny alàlan'ny fampiharana mba hamintinana ny traikefa, mba hampiroboroboana bebe kokoa ny indostrian'ny indostrian'ny trano vy any ambanivohitra.
Tilikambo vy amin'ny angovo elektrika, Firafitra Steel Prefab, Rafitra vy amin'ny Tube, Tilikambon'ny Serasera Kaonty, Tilikambo vy anggoro elektrika, Tilikambo famindrana angovo vy,